Aaladaha lagu garto qoraal-qoraalka | Hal-abuurka khadka tooska ah
Qalabka lagu aqoonsado qoraal-qoraal
Maryan Rose | | Fuentes
Aqoonsiga farta indhaha qaawan waxay noqon kartaa shaqo aad u adag. Hagaag, nooc kastaa wuxuu leeyahay dhumucyo kala duwan, dhammays iyo qaabab kala duwan, mana aha wax aan suurtagal ahayn in la wada aqoonsado. Muddo sanado ah dhibaatadan waxaa lagu xalliyey abuurista qalab online ah oo shaqadan ka dhigaya mid aad u dhakhso badan. Aaladahaan waxaa loo sameeyay in lagu garto xarfaha sawirada, su'aalaha iyo xitaa URL-yada.
Markan waxa aanu ku soo qaadanaynaa qalab taxane ah oo aad ku aqoonsanayso qoraal-qoraal. Yaa og, laga yaabee inaadan heli karin kii aad raadineysay laakiin waxaad ogaatay kuwa kale oo xitaa u fiicnaan kara mashruucaaga.
1 Qalabka lagu aqoonsado qoraal-qoraal
1.1 Waa maxay font
1.3 Waa maxay
1.6 Fontface Ninja
1.7 Jadwalka font
1.8 Google Faraha
Waxaan samaynay doorasho 8 qalab online ah oo kaa caawin doona inaad aqoonsato oo aad aqoonsato xarfahan in jaleecada hore aan si fudud loo aqoonsan karin. Hoos waxaan ku xusnay oo u sharaxnaa wax yar oo iyaga ku saabsan.
Inta badan la isticmaalo xarfaha Serif
Waa maxay font
Waa maxay Font waa mid ka mid ah aaladaha shabakadda ee ugu caansan ee lagu aqoonsado. Waxay ku saabsan tahay a mashiinka raadinta farta sawiro, Hagaag, kaliya waa inaad soo gelisaa sawir leh qoraalka aad rabto inaad aqoonsato. Marka uu bogga shabkada ku shubo sawirka, waxa ay ku tusi doontaa natiijooyin taxane ah oo la mid ah farta aad soo galisay. Haddii aanad helin natiijada aad filaysay, had iyo jeer Waxaad kala tashan kartaa shakigaaga ama fikradahaaga isticmaalayaasha kale ee mareegaha.
Bowfin Printworks waa adeeg nashqadeynta farta oo ku takhasustay alaabada waraaqaha caadiga ah, Aqoonsiga isha iyo shaqooyinka tixraaca aqoonsiga ilaha internetka. Waxay ku siinaysaa macluumaad badan, oo aad ku baran karto xarfaha. Qalabku wuxuu ku weydiin doonaa su'aalo taxane ah oo ku saabsan nooca nooca si nidaamku u aqoonsan karo. Dhammaan weydiimaha waxaa lagu sameeyaa hal bog. Isla isla mulkiilaha bogga shabakadda wuxuu kaga jawaabaa iimaylka haddii aad wax shaki ah ka qabtid markaad aqoonsanayso wejiga qoraalka.
Sida What the Font, degelkani waxa uu u shaqeeyaa adiga oo ku dhejinaya sawirka xarfaha aad rabto in aad aqoonsato. Isticmaal buug-yaraha in ka badan 850000 oo far, ganacsi iyo bilaashba ah, waxa kale oo ay leedahay AI font finder. Sawir kasta oo aad geliso shabakadooda, waxay ku tusi doonaan in ka badan 60 ilood. Waxa ugu horreeya ee aad samaynayso waa inaad gelisaa sawir nadiif ah oo qoraalka ah oo ka kooban farta aad rabto inaad aqoonsato.
Qalabku wuxuu adeegsadaa AI, oo ah nidaam lagu helo qoraalka 90% ee kiisaska. 10% soo haray waxaa sababa muuqaalo aan tayadoodu wanaagsaneyn, taas oo ah, xallin hoose, qoraalka qalloocan, iwm. Waxa ay sameeyaan ayaa ah in ay si toos ah u kala saaraan xarfaha kadibna ay ku tusaan xarfaha ugu shabaha sawirka aad soo galisay, waxa ay sidoo kale ku tusi doonaan links boggaga laga helo xarfahaas, si aad u iibsato ama u soo dejiso.
Identifont waxaa la bilaabay Noofambar 2000. Boggaan waxaa loo sameeyay in lagu siiyo naqshadeeyayaasha qalab ay ku aqoonsadaan xarfaha ama ay doortaan xarfaha ugu wanaagsan mashruucyadooda. Waxay noqotay mid ka mid ah tusmooyinka madax-bannaan ee ugu weyn ee ilaha dhijitaalka ah ee internetka. Habka loo aqoonsan karo farta waxay la mid tahay tan ay isticmaasho PrintWorks Bowfin, maadaama ay leedahay ikhtiyaarka aqoonsado isha maxaad raadinaysaa iyada oo loo marayo su'aalo, inkastoo aad sidoo kale leedahay fursadaha ah ku aqoonso isha sawiro ama wax la mid ah.
Mareegtan ayaa ku siinaysa suurtogalnimada raadi xarfaha adoo isticmaalaya sawirro. Waxa kale oo ay bixisaa in ka badan 130 oo farood oo bilaash ah. Sida boggaga kale ee internetka, waxay ku siinaysaa liiska farta ugu badan ee la mid ah kuwa ay raadinayaan, hadday yihiin kuwo bilaash ah ama lacag la'aan ah.
Waa a kordhinta chrome google, kaas oo gacan ka geysta aqoonsiga ilaha mareegaha kasta. Markaad rakibto, waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa dul boodista qoraalka aad rabto inaad aqoonsato, waxaadna awood u yeelan doontaa inaad hesho magaca font iyo sifooyinka CSS. Waxay ku tusi doontaa soo koobida dhammaan xarfaha lagu isticmaalo mareegahaas. Maxaa intaas ka badan Waxay ku siin doontaa macluumaad farsamo oo ku saabsan nooca nooca, sida miisaanka iyo cabbirka.
Qalabkani wuxuu u taagan yahay tignoolajiyada xoogga badan iyo sifooyinka qarsoon, wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad ku habboonaato sifooyinka OpenType. Waxay leedahay sifada sifaynta summada oo kuu oggolaanaysa inaad hoos u qoddo ilo aan si fudud loo heli karin. Waxaad soo gelin kartaa sawir ama koobi kartaa URL-ka, qalabku wuxuu ku tusi doonaa kuwa aad ugu shabaha isha aad soo gelisay.
Buug-gacmeedka is-dhexgalka, Waxaad ka heli kartaa wadar ahaan 923 qoys oo xarfo ah oo bilaash ah oo bilaash ah. Waxaad ku isticmaali kartaa bog kasta oo shabakad ah, codsi moobil, naqshad, iwm. Fartu waa il furan oo tayo sare leh. Waxa ay leedahay makiinad wax raadis ah oo leh xulashooyin badan oo aad ku heli karto farta aad rabto. Sidoo kale Waxay kuu ogolaanaysaa inaad aqoonsato isha, oo aad isku darsato dhowr nooc si aad u hesho kuwo cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » Qalabka lagu aqoonsado qoraal-qoraal
Sida loo soo dejiyo burushyada Procreate